Quraan Jecel: 'waxaan fulineynaa go'aankii ay maamul goboleedyadu ku gaareen Kismaayo' - BBC News Somali
Quraan Jecel: 'waxaan fulineynaa go'aankii ay maamul goboleedyadu ku gaareen Kismaayo'
Image caption Puntland waxay sheegaysaa inay dhaqan galinayso go'aamadii Kismaayo lagu gaaray
Golaha wasiirrada ee Puntland ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhaqan gelinta heshiiskii madaxda maamul goboleedyada, wada heshiisiinta shacabka Sool iyo qodobbo ku saabsan Somaliland, Al shabaab iyo Daacish, sida uu sheegay Af-hayeenka madaxtooyada Puntland.
Golaha wasiirrada oo shir deg deg ah ku yeeshay magaalada Garowe ayaa dhammaan hay'adaha dowliga ah iyo shaqaalaha xukuumadda Puntland ka mamnuucay iney ka qeyb galaan shirarka ka dhaca Magaalada Muqdisho.
Afhayeenka madaxtooyada Puntland ahna wasiirka xiriirka goleyaasha, Cabdullaahi Quraan jacel oo BBC-da u faahfaahiyay waxyaabaha looga hadlay shirkaasi ayaa sheegay in goluhu uu taageero buuxda u muujiyey "go'aannadii ka soo baxay shirkii dhawaan lagu soo gaba gabeeyay Kismaayo".
"Shirkii Kismaayo oo uu horayba uga qeyb galay madaxweynaha ayey Puntland si buuxda u taageertay," ayuu yiri. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri "Waxaa kale oo laga hadlay sidii loo wajihi lahaa cadawga faraha badan ee ay Puntland leedahay, sida Al-Shabaab, Daacish iyo Somaliland".
Puntland oo xiriirka u jartay dowladda
Colaadda gobolka Sool
Afhayeenka ayaa sheegay in qodobbadii shirka golaha wasiirrada looga hadlay ay ka mid ahaayeen colaadaha ka taagan gobolka Sool, waxaana uu eedeyn kulul dusha uga tuuray xukuumadda Somaliland oo uu sheegay iney masuul ka tahay dhibaatadaas.
BBC-da oo su'aal ka weydiisay sida uu ku xaqiijin karo eedeynta uu Somaliland u jeediyay ayuu kaga jawaabay iney hayaan "caddeymo ay soo bandhigi doonaan haddii loo baahdo".
"Golaha wasiirrada iyo madaxweynahaba waxay baaq u direen odayaasha dhaqanka oo ay ka codsadeen iney dadaal u galaan sidii loo kala celin lahaa shacabka ku dagaallamaya deegaannada Sool, dowladduna dhankeeda ayey dadaal ka sameyn doontaa," ayuu yiri afhayeenka.
Cabdullaahi Quraan jecel ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraad ah ka sii bixiyo mowqifka Puntland ay ka taagantahay xiriirka dowladda dhexe, waxaana uu ku celceliyay iney daba socdaan natiijada shirkii madaxda maamul goboleedyada.